के कोरोना जैविक हतियार हो ? « Mero LifeStyle
कोरोना भाइरसलाई लिएर चीनको दाबीमाथि अहिलेसम्म कसैले स्वीकारेका छैनन् । हरेकको यही प्रश्न छ कि, चीनमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस देखिएको थियो, तर अहिले यति सुरक्षित कसरी छ ? कसरी चीनले ६ देखि ८ महिनामै कोरोनालाई नियन्त्रण गर्यो । जबकी अमेरिका जस्ता शक्तिशाली र विकसित देशले समेत २ वर्ष यता घुँडा टेकीरहेका छन् । ।
हालै एउटा नयाँ रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । जो कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित छ र चीनमाथिको शंकालाई झनै डरलाग्दो बनाएको छ ।
यो रिपोर्ट २०१५ को घटनाक्रमसँग जोडिएको छ । जुन बेला मानिस कोरोनासँग अन्जान थिए । तर चीनले त्यहिबेला कोरोना भाइरसलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने बारेमा परीक्षण गरिरहेको थियो । यति मात्रै होइन, चिनियाँ सैन्य वैज्ञानिकले तेश्रो विश्व युद्ध जैविक हतियारबाट हुने भविष्यवाणी गरेको भन्ने आशंका छ ।
अमेरिकी विदेश विभागले पाएको जासुसी दस्ताबेजको श्रोत दिँदै मिडिया रिपोर्टमा यो दाबी गरिएको हो ।
भाइरस कृत्रिम रुपमा परिवर्तन गर्न मिल्ने र यसले मानवलाई बिरामी बनाउने भाइरस उत्पत्ति गर्न मिल्ने गरी बनाइएको बताइएको छ ।
ब्रिटेनको ‘द सन’ न्यूजपेपरले अष्ट्रेलियाको समाचार पत्र ‘द अष्ट्रेलियन’को श्रोत दिँदै अमेरिकी विदेश विभागले हात पारेको बम्बशेल अर्थात् बिस्फोटक जानकारीको अनुसार चिनियाँ सेना पीएलएका कमाण्डरले यो कुटिल पूर्वानुमान लगाइरहेका छन् ।
अमेरिकी अधिकारीले पाएका यी कथित दस्तावेजमा २०१५ मा सैन्य वैज्ञानिक र चीनका स्वास्थ्य अधिकारीले लेखेका थिए । जो आफैँ कोरोना भाइरसको बारेमा अनुसन्धान गरिरहेका थिए ।
चिनियाँ वैज्ञानिकले ‘सार्स कोरोना’ भाइरसको चर्चा जेनेटिक हतियारको नयाँ युगको रुपमा गरेका छन् । कोरोना यसको एउटा उदाहरण हो । चिनियाँ सैनिकले यसको चर्चा एक जैविक हमलाबाट शत्रुको स्वास्थ्य व्यवस्थालाई ध्वस्त पार्न सकिनेको रुपमा गरेका छन् ।
चिनियाँ सैनिकले यो दस्तावेजमा अमेरिकी वायुसेनाका कर्नल माइकल जेको अध्ययनलाई पनि नियालेको बताएका छन् । जसले तृतीय विश्वयुद्ध जैविक हतियारबाट लड्ने भविष्यवाणी गरेका थिए ।
चीनको सरकारी पत्रिका ‘ग्लोवल टाइम्स’ले यो लेख प्रकाशित गरेको भन्दै ‘द अष्ट्रेलियन‘को आलोचना गरेको छ र यसलाई चीनको छवि बिगार्न रचेको षड्यन्त्र बताएको छ ।
यसमा भाइरस कृत्रिम रुपमा परिवर्तन गर्न मिल्ने र यसले मानवलाई बिरामी बनाउने भाइरस उत्पत्ति गर्न मिल्ने गरी बनाइएको बताइएको छ । त्यसपछि एउटा यस्तो हतियारको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जो संसारमा कसैले देखेको थिएन ।
यो दस्तावेजमा चीनको प्रमुख स्वास्थ्यअधिकारीहरुको लेख रहेको बताइएको छ । कोरोनाको पहिलो केस २०१९ मा फेला परेको थियो । त्यसपछि यो वैश्विक रुपमा फैलिएको थियो ।
यो खुलासापछि अष्ट्रेलियन राजनेता जेम्स पेटरसनले यो दस्तावेजले कोरोनाको उत्पत्तिलाई लिएर चीनमाथि थप शंका पैदा गरेको बताएका छन् । तर चीनको सरकारी पत्रिका ‘ग्लोवल टाइम्स’ले यो लेख प्रकाशित गरेको भन्दै ‘द अष्ट्रेलियन‘को आलोचना गरेको छ र यसलाई चीनको छवि बिगार्न रचेको षड्यन्त्र बताएको छ ।